Antsirabe : feno 60 taona ny CRMM | NewsMada
Antsirabe : feno 60 taona ny CRMM
Nanomboka ny 22 desambra lasa teo ary hifarana ny volana marsa 2016 ho avy io ny fankalazana ny faha-60 taon’ny Foibem-pitsaboana momba ny lefakozatra eto Madagasikara (CRMM). Niorina ny 5 janoary taona 1955 ny foibe ka dokotera vazaha no nitantana azy tamin’izany. Taty aoriana, nifandimby nampandeha azy ireo dokotera malagasy manampahaizana manokana momba ny fitsaboana ny fahasembanana ara-batana. Nisongadina ny profesora Rakotondrainibe sady vehivavy voalohany ben’ny Tanànan’Antsirabe ihany koa. Lehiben’ny mpitsabo amin’izao fotoana izao ny dokotera Rakotonandrasana Bonaventure Emilien.
Telo ny tanjon’ny fanamarihana: fampahalalana ny fisian’ity CRMM amin’ny vararavarana misokatra. Eo koa ny fanamboarana ny fotodrafitrasa ivelany sy anatiny izay efa antitra.
Farany, ny fanavaozana ireo fitaovam-pitsaboana ampiasaina ao anivony izay efa nilaozan’ny toetrandro.
Toeram-pitsaboana manana ny maha izy azy ny CRMM fa tsy toy ny foibem-pitsaboana ara-pahasalamana rehetra satria mandray an-tanana ireo manana fahasembanana ara-batana na ara-tsaina ary foibe tokana aty amin’ny faritra Afrika Atsinanana. Mizara dimy ny sampam-pitsaboana ao amin’ny CRMM. Fizahana ireo marary tsy mijanona ao amin’ny foibe, fanazarana ireo sembana amin’ny fanetsiketsehana ny rantsam-batana marary, fandidiana. Fanamboarana solon-tongotra na solon-tanana ary ny fanomezana fampianarana sahaza ny tsirairay mifanandrify amin’ny sakana ara-pahasalamana mahazo azy avy.
Misy EPP sy CEG mifanolo-bodirindrina amin’ny foiben’ny CRMM ahafahan’ireo ankizy tsaboina ao anivony izay latsaky ny 18 taona no betsaka mianatra.
Nilaza ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka fa handray anjara feno amin’ny fanamboarana sy fanavaozana ny CRMM sy ny fitaovam-pitsaboana ao anatiny. Efa nanolotra simenitra roa taonina sahady koa ny ben’ny Tanànan’Antsirabe, vola roa hetsy kosa ny nomen’ny solombavambahoaka voafidy tao Antsirabe II.